Wasiirka Waraafinta oo dalka ku soo laabtay – Radio Muqdisho
Wasiirka Waraafinta oo dalka ku soo laabtay
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka Kenya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay.
Wasiir Maareeye ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa uu la kulmay Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Safiirka Japan iyo mas’uuliyiin kale, waxaana dhamaan mas’uuliyiinta uu Wasiirka la kulmay uu kala hadlay arrimo muhiim u ah dalka Soomaaliya.
Mudane Maxamed Cabdi Xayir “ Maareeye” Wasiirka Warfaafinta oo markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay guul ku soo dhamaaday kulamadii uu la yeeshay mas’uuliyiinta kala duwan ee magaalada Nairobi.
“Safaarado iyo hay’ado dhowr ah oo warbaahinta taageera ayaanu kulamo la soo yeelanay iyo sii wadida taageerada ay siinayeen ummadda Soomaaliyeed waana ku farxeen sida aan hadda wax u wadno” ayuu yiri Mudane Maareeyee.
Barnaamijka kulanka todobaadka oo lagu falanqeeyay wax qabadka shirkadaha Ceymiska “Dhageyso+Sawirro”